Our Services | Myanmar Art Construction & Development Co., Ltd
<< Go Back To Home
" အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းသစ်များ"
MYANMAR ART မှ အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် ARCHITECT များမှ စနစ်ကျနစွာရေးဆွဲထားသည့် အိမ်ပုံစံများကို အရည်အသွေးပြည့်ဝါရင့် အင်ဂျင်နီယာများမှ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ဆောက်လိုသူ Customer များ၏ စိတ်တိုင်းကျ ARCHITECT ဒီဇိုင်း(Customize) များဖြင့်လည်း တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ပေးနေပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ စတင်ပြီး Bankများ နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နှစ်ရှည်အရစ်ကျ ငွေပေးချေသည့် စနစ်ဖြင့် အိမ်ယာ၊ တိုက်တာ အဆောက်အအုံများကို အရည်အသွေး မြင့်မားစွာ တာဝန်ယူ ဆောက်လုပ်ပေးမည့် စီမံကိန်းများဖြင့် စတင်မိတ်ဆက် ပေးတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစီမံကိန်းများသည် မိမိတို့၏ မူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း အများပြည်သူအတွက် အဆင့်အတန်းမြင့်မား ကောင်းမွန်သည့် လူနေမှုပုံစံများ ဖန်တီးပေးရန်နှင့်အညီ အများပြည်သူတို့၏ လိုအင်ဆန္ဒနှင့်အညီ ထပ်တူကျပြီး အဆင့်အတန်း မြင့်မားကောင်းမွန်အောင် အထူးဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ပြီး လမ်း၊ တံတား၊အိုးအိမ်၊ အဆောက်အအုံများအား နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အားလျှော်စွာ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များအပြင် အခြားမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါ ရေရှည်အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များ ရှိသည့်အတွက် သေချာခိုင်မာသည့် အနာဂတ်အား ဖန်တီးနိုင်ပါကြောင်းနှင့် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းသစ်များသည်လည်း လုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိနိုင်ရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Since 2013, MYANMAR ART was giving the best service to fulfil the customer satisfaction by providing these services as follow.
✥ Qualitative Construction of Modernized, Buildings, Roads and Bridges
✥ Culvert and Irrigation
✥ Earth Road
✥ Structural Design
✥ Detail estimate & bill of quantity
✥ Construction upon P.A.E basic upon Supervision System
✥ Services for custom design & estimate
✥ Steel Structure Building
✥ RCC Building
✥ Painting & Renovations
✥ Electrical Installation and Plumbing
✥ Decoration with Marble and Granite
✥ Interior Design and Decoration
✥ Land Rehabilitation Activities
✥ Quality Control Services
In January 2019, MYANMAR ART will launch the new product as HOME CONSTRUCTION LOAN payment system for customers who want to build the Residential House.
20 x 60 Residential (One Storey) Exterior Design
20 x 60 Two Storey Residential Project
40 X 60 Residential (One Storey) Exterior Design
40 X 60 Two Storey Residential Project
40 X 60 Three Storey Residential Project
✥ MYANMAR ART Construction & Development Co., Ltd သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် စတင် တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက လမ်း၊ တံတား၊ အိုးအိမ်၊ တိုက်တာ အဆောက်အဦများ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မြောက်မြားစွာဖြင့် အခိုင်အမာ ရပ်တည်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ မူလရည်ရွယ်ချက်ထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာခြင်းဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာ သိမြင်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်၊ နိုင်ငံတော်၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ်များတွင် ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍမှနေ၍ အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်အနေဖြင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြိုးပမ်းနေသူအဖြစ် ရေရှည်ရပ်တည်သွားရန် စသည့် ခံယူချက်များနှင့်အညီ အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် အင်ဂျင်နီယာများဖြင့် အရည်အသွေး၊ စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မှီစွာဖြင့် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသည့် အဆောက်အအုံများကို ဆောက်လုပ်ပေးနေပြီလည်း ဖြစ်ပါသည်။
✥ Architect များမှ ခေတ်မီစနစ်ကျနသေသပ်သည့် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများ ရေးဆွဲပေးခြင်း။
✥ အဆောက်အဦး ပုံစံဒီဇိုင်းများကို မြေပြင်အခြေအနေနှင့်အညီ ရေးဆွဲပေးနိုင်ရန် ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး Customer စိတ်ကြိုက်ပုံစံနှင့် ထပ်တူကျအောင် ခေတ်မှီဒီဇိုင်းများကို ရေးဆွဲပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ Customer များ လက်ဝယ်တွင် အဆင်သင့် Archi ဒီဇိုင်းရှိပါကလည်း ထပ်မံကောင်းမွန်းအောင် အကြံဉာဏ်ပေးပြီး ရေးဆွဲပေးခြင်း။
✥ QS Engineer များမှ အရည်အသွေးပြည့်မှီသည့် အဆောက်အဦးများ၏ ကုန်ကျစရိတ်အား အသေးစိတ်ခန့်မှန်း တွက်ချက်ပေးခြင်း။
✥ အဆောက်အဦး၏ အပြင်ပိုင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းတွင်လည်း စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မှီသော ခေတ်နှင့်အညီ ဒီဇိုင်းပုံစံ မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများ အားလည်း အသေးစိတ် တွက်ချက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး အရည်အသွေး ဦးစားပေးကာ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာ တွက်ချက်ပေးခြင်း။
✥ Civil Engineer များမှလည်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များအတွင်း နေ့စဉ်ကွင်းဆင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အသေးစိတ်စစ်ဆေး တည်ဆောက်ပေးသည့်အတွက် စိတ်ချယုံကြည်ရသည့် အရည်အသွေးမှီ အဆောက်အဦးများကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ခြင်း။
အထက်ဖော်ပြပါ အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း အား တစ်နေရာတည်း တစ်ပြိုင်နက် ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်အတွက် မိမိတို့ MYANMAR ART Construction & Development Co.,Ltd မှ မိဘ၊ ပြည်သူ၊ မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ်များအားလုံးကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျက်ရှိနေပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါသည်။
✥ ကျွန်ုပ်တို့ MYANMAR ART မှ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် တိုက်တာ အဆောက်အအုံများ၏ အတွင်းခန်းအလှဖွဲ့ Intenior Design ပြုလုပ်ပေးသည့် ကိစ္စရပ်အ၀၀ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။ မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ ဆောက်လုပ်နေသည့် အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားပြင်ပမှ အဆောက်အအုံများကိုပါ Interior Design များအား တာဝန်ယူ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
MYANMAR ART မှ Renovation ပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အောက်ပါအတိုင်း အသေးစိတ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
✥ အရည်အသွေးပြည့်မီပြီး ခေတ်မီဆန်းသစ်သော အဆောက်အဦး၊ လမ်းနှင့်တံတားများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊
✥ ဆည်မြောင်း၊ ကန်ချောင်းများ ပြုပြင်ဖောက်လုပ်ခြင်း၊
✥ မြေသားလမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
✥ Structure Design တွတ်ချက်ပေးခြင်း၊
✥ အသေးစိတ်ခန့်မှန်းခြေ ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ပေးခြင်း၊
✥ PAE စနစ်ဖြင့် အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
✥ Customer စိတ်တိုင်းကျ ပုံစံရေးဆွဲပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
✥ Steel Structure အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း၊
✥ သံကူကွန်ကရစ် အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊
✥ ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်မွန်းမံရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
✥ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းများ၊
✥ အလှဆင်ကျောက်ပြား၊ ကြွေပြားများ ကပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊
✥ အခန်းတွင်း အလှဆင်ခြင်း၊
✥ မြေယာအလှဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊
✥ ခြံစည်းရိုး ခတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊
✥ Online မှ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးခြင်း၊
✥ ကျွမ်းကျင်သော မန်နေဂျာနှင့် လုပ်သားများမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
✥ အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
✥ ကျွန်ုပ်တို့ MYANMAR ART မှ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် တိုက်တာ အဆောက်အအုံများအား Renovation ပြုလုပ်ပေးသည့် ကိစ္စရပ်အ၀၀ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။
✥ ဆောက်လုပ်ပြီးသား အဆောက်အအုံများအား ပုံစံသစ်ဖြင့် ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု၊ အိမ်၊ အဆောက်အအုံအတွင်းခန်းနှင့် မျက်နှာကျက်များကိုပါ ပုံစံသစ်များဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင် ပေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီး နှင့် သက်ဆိုင်သည်များကိုလည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ အခန်းဖွဲ့ပြင်ဆင်ခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ခေတ်မီပုံကျသေသပ်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိနေပါသည်။
Times City Complex, Building (401), Level (4), Hanthawaddy Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar
09 975 959 111, 09 45 969 1113
09 45 969 1116, 09 45 969 1117
© 2019-2022 MYANMAR ART Co.,Ltd.